Ụdị ugwu mgbawa: àgwà na ụdị mgbawa | Meteorology netwọkụ
Portillo nke German | 24/11/2021 16:42 | Geology
Anyị maara na ugwu mgbawa bụ ihe owuwu ala nke na-achụpụ magma nke si n'ime ime ụwa. Magma abụghị ihe ọzọ karịa nnukwu nkume a wụrụ awụ nke sitere na uwe elu ụwa. Mgbe magma rutere n'elu a na-akpọ ya lava. Enwere ọtụtụ ụdị ugwu mgbawa dịka ọdịdị ha si dị na ụdị ọkụ ọkụ ha nwere.
N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị ihe bụ ụdị ugwu mgbawa dị iche iche dị na ihe mgbawa ha.
1 Ụdị ugwu mgbawa dịka ọrụ ha siri dị
2 Ụdị ugwu mgbawa dịka mgbawa ha siri dị
3 Ofdị na-agbawa agbawa
Ụdị ugwu mgbawa dịka ọrụ ha siri dị
Ndị a bụ isi ụdị ugwu mgbawa dịka ụdị ọrụ ha siri dị:
Volcano na-arụ ọrụ. Ha bụ ugwu mgbawa na-adịghị arụ ọrụ nke nwere ike ịgbawa n'oge ọ bụla. Nke a na-eme n'ọtụtụ ugwu mgbawa, ma dịka ọmụmaatụ, anyị nwere ike ịkọwa ugwu mgbawa Cumbre Vieja na La Palma, Spain (na-agbawa ugbu a), ugwu mgbawa Etna dị na Sicily, Ịtali (na-agbapụta ugbu a) na ugwu mgbawa Fuego na Guatemala (nke na-agbawa ugbu a) na ugwu mgbawa. Volcano nke Irazú dị na Costa Rica.
Ugwu mgbawa na-adịghị arụ ọrụ. A na-akpọkwa ha ndị na-ehi ụra, ha bụkwa ugwu na-agbọpụta ọkụ nke na-eme ka ọ dị ntakịrị ihe. N'agbanyeghị obere ọrụ ya, ọ na-agbawa mgbe ụfọdụ. Mgbe a na-enweghị mgbawa ugwu mgbawa ruo ọtụtụ narị afọ, a na-ewere ugwu mgbawa ka ọ na-ehi ụra. Ugwu mgbawa nke Teide dị na Canary Islands nke Spain na nnukwu mgbawa ugwu Yellowstone dị na United States bụ ihe atụ nke ugwu mgbawa na-ehi ụra. Otú ọ dị, ihe atụ abụọ ahụ egosiwo mmegharị n'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, e nweela ala ọma jijiji dị nro na mpaghara ha, na-egosi na ha ka "dị ndụ" ma nwee ike na-arụ ọrụ n'oge ụfọdụ, ha adịghị anwụ anwụ ma ọ bụ chụpụ.
Ugwu mgbawa na-ekpochapụ. Ha bụ ugwu mgbawa ikpeazụ gbawara, malitela ihe karịrị afọ 25.000. N'ọnọdụ ọ bụla, ndị nchọpụta anaghị ewepụ na ha nwere ike ịpụta ọzọ n'oge ụfọdụ. A na-akpọkwa usoro a ugwu mgbawa nke tectonic ije si na magma isi iyi ya pụọ. Ugwu mgbawa nke Diamond Head dị na Hawaii bụ ihe atụ nke ugwu mgbawa na-ekpochapụ.
Ụdị ugwu mgbawa dịka mgbawa ha siri dị
Ndị a bụ ụdị ugwu mgbawa dị iche iche nke dị dịka mgbawa ha si dị:
Ugwu mgbawa ugwu. Lava sitere na ugwu mgbawa ndị a bụ mmiri mmiri na ọ naghị ahapụ gas ma ọ bụ mee ka mgbawa n'oge mgbawa. Ya mere, mgbawa ugwu ahụ gbachiri nkịtị. Ọtụtụ n'ime ugwu mgbawa nke Hawaii nwere ụdị mgbawa ndị a, ya mere aha ya. Kpọmkwem, anyị nwere ike ịkpọ ugwu mgbawa Hawaii a na-akpọ Mauna Loa.
Volcano nke Strombolian. N'adịghị ka ugwu mgbawa ahụ akọwapụtara nke ọma, ugwu mgbawa nke Strombolian na-egosipụta obere lava viscous na-asọpụta, na mgbawa gụnyere mgbawa na-aga n'ihu. N'ezie, lava na-egbuke egbuke ka ọ na-ebilite ọkpọkọ, mgbe ahụ, ọrụ mgbawa ugwu na-ebelata iji malite bọọlụ lava nwere ọkara nke a na-akpọ volcanic projectiles. Aha ugwu mgbawa a na-ezo aka na ugwu mgbawa nke Strombolia dị n'Ịtali, bụ́ nke na-agbawa n'ụda olu kwa nkeji iri ọ bụla.
Volcanoes. N'okwu a, ha bụ ihe mgbawa nke ukwuu nke nwere ike ibibi ugwu mgbawa nke ha dị. A na-eji lava mara nke ukwuu na ọ nwere nnukwu gas. Dị ka ihe atụ, anyị pụrụ ikwu banyere ugwu mgbawa nke Vulcan dị n'Ịtali, bụ́ onye ọrụ mgbawa nke mere ka ugwu mgbawa a pụta.
Volcano nke Plilian. Volcanoes ndị a nwere lava nke viscous nke ukwuu, nke na-eme ngwa ngwa sie ike wee mepụta plọg n'ime oghere ahụ. Nnukwu nrụgide nke gas dị n'ime na-ebute na-eme ka mgbawa transverse meghe, mgbe ụfọdụ na-achụpụ plọg ahụ n'ike. Dịka ọmụmaatụ, anyị nwere ike ịkpọ ugwu ugwu Bailey dị na Martinique, nke sitere na aha ugwu mgbawa a.
Volcano nke Hydromagmatic. A na-ebute mgbawa ugwu mgbawa site na mmekọrịta nke magma na ala ma ọ bụ mmiri elu. Dabere na oke magma / mmiri, enwere ike ịhapụ ọtụtụ uzuoku. Ụdị ọrụ mgbawa mgbawa a na-ahụkarị na ugwu mgbawa nke mpaghara Campo de Calatrava na Spain.
ugwu mgbawa Iceland. N'ụdị ugwu mgbawa dị otú a, lava na-asọpụta na mgbawa na-esi n'ime ala chụpụ ya, ọ bụghị site na oghere. Otu a ka e si mụọ nnukwu ala lava. Ọtụtụ n'ime ugwu mgbawa ndị a dị na Iceland, ya mere ha nwetara aha ha. Otu ihe atụ a kapịrị ọnụ bụ ugwu mgbawa nke Krafla dị na Iceland.
Ụgbọ mmiri mgbawa ugwu. Ọ bụ ezie na ọ bụ ihe ijuanya, e nwekwara ugwu mgbawa na-arụ ọrụ na ala nke oké osimiri. N'ezie, mgbawa nke oké osimiri na-adịkarị mkpụmkpụ. N'ọnọdụ ụfọdụ, lava awụpụrụ nwere ike iru n'elu wee mepụta agwaetiti mgbawa ugwu ka ọ na-ajụkwa oyi.
Ka anyị lebakwuo anya n'ụdị mgbawa nke ugwu mgbawa nke ọ bụla nwere. Ọ dabere na nkuzi na mmepe mmepe. Ka anyị hụ ụdị mgbawa dị adị:
Asụsụ Hawaii: Ugwu mgbawa na-agbapụta ntakịrị viscous lava, bụ́ nke na-adị nnọọ mmiri mmiri n'ihi na ọ naghị enwe ihe dị ukwuu nke pyroclastic (ngwakọta ọkụ na-ekpo ọkụ nke gas, ash, na iberibe nkume. A na-eji nwayọọ nwayọọ na-ewepụta gas ahụ, ya mere mgbawa ahụ dị ntakịrị.
Strombolian: ugwu mgbawa na-ahapụ ihe pyroclastic. Mgbawa ndị a na-adị mgbe ụfọdụ, ugwu mgbawa anaghị aga n'ihu na-ekupụ lava.
Vulcanian: Ugwu mgbawa na-ebupụta lava viscous nke nwere obere mmiri mmiri wee sie ike ngwa ngwa. Nnukwu ígwé ojii nke ihe pyroclastic na-etolite na nnukwu ntụ ntụ na-apụta. Ha na-eji mgbawa n'ụdị ígwé ojii dị ka olu ma ọ bụ fungi. Ihe omume na-amalitekarị site na mgbawa mmiri na-ebupụta irighiri ihe. Isi ihe na-eme na-agụnyekarị mgbawa nke magma viscous, nke bara ụba na gas na-agbọpụta ugwu ma na-etolite ígwé ojii gbara ọchịchịrị.
Pliniana ma ọ bụ Vesuviana: ugwu mgbawa na-agbawa lava nke ukwuu viscous na ike. A na-eji ike ya na-adịghị ahụkebe mara ya, mgbawa gaseous na-aga n'ihu na nnukwu mwụfu ntụ. Mgbe ụfọdụ mgbawa magma na-eme ka elu ugwu mgbawa daa wee mepụta oghere. N'oge mgbawa ugwu ugwu Prinia, ezigbo ntụ nwere ike gbasaa n'akụkụ buru ibu. Aha mgbawa nke ugwu mgbawa Pliny bụ onye ama ama onye Rome bụ Pliny the Elder, onye nwụrụ na mgbawa ugwu Vesuvius na AD 79.
Brawler: Akpọrọ ugwu mgbawa a aha mgbawa ugwu mgbawa nke Pelee na Martinique na 1902, nke gburu ọtụtụ puku mmadụ. Lava ahụ na-agbakọta ngwa ngwa wee mepụta plọg na oghere ahụ. Ebe ọ bụ na ọ dịghị ihe mgbapụta maka gas, a ga-enwe ọtụtụ nrụgide n'ime ugwu mgbawa ahụ, ya mere mgbidi nke ugwu mgbawa na-amalite imebi na lava na-apụ n'akụkụ abụọ nke mgbidi ahụ.
Mmiri mgbawa ugwu: Ha bụ mgbawa nke na-emepụta site na mmekọrịta magma na mmiri ala ma ọ bụ mmiri elu. Ha bụ 'mmiri mmiri: nhata na mgbawa strombolian, n'agbanyeghị na ha na-agbawa karịa.
Enwere m olileanya na site na ozi a, ị ga-amụtakwu banyere ụdị ugwu mgbawa dị iche iche na mgbawa ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Ụdị ugwu mgbawa